Ogaden News Agency (ONA) – Dowlada UK oo aqoonsatay Xadgudubyada Xuquuqul insaanka Liyu Poliska
Dowlada UK oo aqoonsatay Xadgudubyada Xuquuqul insaanka Liyu Poliska
Posted by ONA Admin	/ January 14, 2013
Wasiirka Horumarinta iyo Deeqaha ee Wadanka Britain Lyther Feather Stone( Lynne Featherstone MP
International development minister) ayaa warqad ay u dirtay Wargeyska Guardian ku sheegtay in dowlada wadanka UK ay ka warheyso xad gudubyada bani aadanka ka dhanka ah ee Liyu Polisku ugeystaan shacabka Somalida ogadeniya.
Dowlada UK waxay si xadjir ah ugasoo horjeeda xadgudubyada xuquuqda bani aadamka waxaanan ka shaqeynayna anaga iyo qaramada midowbayba sidii xuquuqda shacabka somalida Ogadeniya loo daryeeli lahaa. Midaas oo ah talada ay soo jeedisay Haayada Xuquuql Insaanka.
Sidoo kale wasiirka waxay sheegtay in lacag aan lasiin doonin Liyu Poliska islamarkaasna aysan jirin lacag horey loosiyay Liyu poliska. Waxayse wasiirku sheegtay in Lacago lasiiyo shacabka somalida Ogadeniya midaas oo loogu talo galay in lagu horumariyo laguna daryeelo shacabkaas.
Wasiirka ayaa kamid ah Xisbiga Liberal democrat ee dowlada taladiisa ay wada wadaagan xisbiga Conservative-ka.